Raha efa roa volana katroka izay ny ao amin’ny kaoperativa FMA, na fitaterana mendrika ho an’Antananarivo no nampakatra saran-dalana ho 500 , dia roa herinandro kosa ny an’ireo kaoperativa sasantsasany ao amin’ny Uctu no nampakatra …Tohiny
Namoaka fanambarana omaly ireo fiarahamonim-pirenena sy ny Transparency International, fa nisy ny fifanarahan’ny vondrona malagasy momba ny fampandrosoana ara-toekarana sy ny fampivoarana ny orinasa (AMDP), tamin’ny fivondronan’ireo mpampiasa vola sinoa Taihe Century Investments Developments Co. …Tohiny
Niditra teoamin’ny andro faharoa ny « Festival Tamaga Midôla” omaly. Hetsika ara-panatanjahantena karakarain’ny fikambanana Tafaray ao Toamasina, renivohitr’i Betsimisaraka. Marihina fa taranja fanao eny amin’ny tora-pasika no hifaninanana amin’ity “Festival Tamaga Midôla” ity. Ahitana ny …Tohiny
Gazety TRIATRA : Amin’ ny maha mpahay lalàna sy mpanara-maso ny fiainam-pirenena anao. Ahoana ny fahitanao ny fanombohan’ny fampielezan-kevitra ? Imbiky Herilaza : Raha ny fahitako ny ho fiantombohan’ny fampielezan-kevitra amin’ny daty ofisialy dia toa …Tohiny